Wararka - Mashiinka Khafiifka ah ee Laser Laser 1060nm Diode Miyaa Beddel Fiican Loogu Tahay Xaydha Caloosha ee Caloosha, Gacmaha Jacaylka Iyo Dufanka Kale ee Jirka?
1060nm Diode Laser Mashiinka Khafiifinta Miyaa Baddal Ka Fiican Oo Loogu Talo Galay Baruurta Caloosha ee Caloosha, Gacmaha Jacaylka Iyo Dufanka Kale ee Jirka
1060nm Diode Laser Mashiinka Khafiifinta Miyaa Baddal Ka Fiican Oo Loogu Talo Galay Baruurta Caloosha ee Caloosha, Gacmaha Jacaylka Iyo Dufanka Kale ee Jirka?
Haddii aad si adag isugu dayday inaad ka takhalusto dufanka calool adayga, gacmaha jacaylka iyo noocyada kale ee dufanka jidhka, shaki la'aan inaad fiiro gaar ah u yeelatay xayeysiisyada telefishanka ee badan ee CoolSculpting. Xayeysiisyadani waxay muujinayaan awoodda daaweyntan aan faafa lahayn ee looga takhalusi karo dufanka hadhay cuntada ka dib iyo jimicsiga ayaa kaa caawiyay inaad miisaankaaga dhinto. Sanado badan ka dib daweynta bukaanada iyo qabashada kumanaan hababka is qurxinta ah, waxaan ku soo gunaanaday in daaweyn kale oo aan faafin ay bedel fiican ugu tahay bukaanno badan. Daaweyntaasi waa 1060nm diode laser mishiinka khafiifinta gubanaya.
Halkii laga isticmaali lahaa qabow, 1060nm diode laser mishiinka khafiifinta wuxuu adeegsadaa kuleylka laser si uu u dilo unugyada baruurta. Waxay leedahay isla geedi socod guud oo isku mid ah — unugyada baruurta waa la bartilmaameedsadaa, la dilaa, oo si tartiib ah ayuu jirka uga soo baxdaa. Muddada dhowrka bilood ah ee daaweyntaada kadib, waxaad ku arki doontaa hoos u dhaca dufanka aagga la bartilmaameedsaday.
1060nm diode laser mishiinka khafiifinta ayaa ku habboon dadka leh aagag yar oo dufan madax adag laakiin haddii kale xaalad jireed oo wanaagsan ku sugan. Natiijooyinka sidoo kale waa kuwo joogto ah illaa iyo inta bukaanku ilaaliyo culeyskooda iyo caafimaadkooda jireed.
Qaabka aaladda ayaa adkeyneysa in la isticmaalo qeybaha jirka ee qaloocsan, marka waxyar ayey ka xaddidan tahay xulashooyinka kale. Bukaannada qaar waxay soo sheegaan inay dareemayaan xoogaa gubasho ah kuleylka awgood, in kasta oo aaladda ay qabow leedahay inta lagu jiro daweynta.
Mashiinka mishiinka slimming laser-ka ee 1060nm diode, ma jiro nuugid ama jiid jireed oo unug ah. Qalabku wuxuu fidsan yahay dusha aagga aad rabto inaad hoos u dhigto. Tamarta leysarka ayaa dhex gasho unugyada waxayna u keentaa dhaawac kuleylka unugyada baruurta. Waxay marayaan unugga dhimashadiisa barnaamijka, iyo habkaaga difaaca ayaa ka saari doona.
1060nm diode laser mishiinka khafiifinta ayaa aad ugu habboon
Haddii aad tahay qof mashquul badan (maalmahan, yuu ahayn?) Daaweynta laba aag 25 daqiiqo gudahood 1060nm diode laser mishiinka khafiifiya ayaa ah waqti weyn oo lagu badbaadiyo in ka badan saacad la qaato qayb kasta oo leh cryolipolysis. Maaddaama aysan jirin wax waqti dhimis ah oo leh mashiinka khafiifka ah ee leysarka laser-ka ah ee 1060nm diode laser, waxaad heli kartaa daaweyn isla markaana waxaad ugu laaban kartaa noloshaadii mashquulka ahayd.